News under कर्णाली
काठमाडौं &ndash; कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको ह्विप नमानेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि मन्त्री पद उपहार पाएका ३ जनाले आज शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन्। आफ्ना पक्षमा मतदान गरेर पद र सरकार जोगाइदिएको भोलिपल्टै शनिबार माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, अमरबहादुर...
काठमाडौं &ndash; कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले आज बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेकी छन्। उनले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षदेखि कर्णालीको तीव्र विकास र आर्थिक...
काठमाडौं &ndash; कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका धर्मराज रेग्मीको सांसद पद सोमबारदेखि खारेज भएको छ।कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरी रेग्मीको सांसद पद नरहेको जानकारी सदनलाई गराएको छ। चैत २१ गते बसेको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले उनलाई कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभालाई गराएको थियो। सोही आधारमा...
धनगढी &ndash; कर्णाली चिसापानी पुलबाट हाम फालेका तीन जनामध्ये एक किशोर बेपत्ता भएका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर २ का १८ वर्षीय सञ्जय खड्का कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। उनीसँगै नदीमा हाम फालेका लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ का १८ वर्षीय लोकेश प्याकुरेल घाइते छन्। उनी हाम फालेको केही समयमै फेला परेका...
सिस्नेरी बस्तीमा आगलागी : ९ घर जलेर नष्ट
सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको सिस्नेरी बस्तीमा आगलागीबाट नौ घर जलेर नष्ट भएका छन् । बराहताल&ndash;९ मा रहेको सिस्नेरी बस्तीमा बिहीबार अपराह्न चार बजेतिर आगलागी भएको हो । आठ घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको र एउटा आशिंकरूपमा जलेको वडाध्यक्ष युवराज कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरियाली सामुदायिक वनमा लागेको...
मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा : राजीनामा दिन लागेका मन्त्रीलाई शाहीले भने-'अन्तिम क्याबिनेट बैठक बसौं न'
सुर्खेत &ndash; कर्णाली प्रदेशका तीन जना मन्त्रीहरूले मंगलबार राजीनामा दिने भएका छन्। नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले आज राजीनामा दिन लागेका हुन्। आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन लागेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्तिम क्याबिनेट बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका छन्। हामीले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं। मुख्यमन्त्रीज्यूले अन्तिम पटक क्याबिनेट...
सुदूरपश्चिम &ndash; कैलालीको भजनी नगरपालिका मोरियाघाटस्थित नेपाल&ndash;भारत सीमा नाकामा सोमबार साँझ लागुऔषधका भारतीय तस्कर र नेपाल प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको छ। सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लागुऔषध भित्रिन लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेम शाहीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोली र भारतीय तस्करबीच गोली हानाहान भएको हो। जिल्ला...
अज्ञात समूहद्वारा नगरप्रमुखका दुई डोजरमा आगजनी
डोल्पा &ndash; ठुलीभेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीका दुईवटा डोजरमा आगजनी भएको छ । नगरपालिकाको केन्द्र जुफालबाट वडा नं ५ र ६ जोड्ने सडक खन्&zwj;ने क्रममा जुफाल र लहाराको बीचको जङ्गलमा भे१क ४६३६ र भे१क १२९४ नंका दुईवटै डोजरमाथि अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरिएको प्रहरी निरीक्षक हरिराम डाँगीले जानकारी दिए । घटना विषयमा...
हुम्ला &ndash; सिमकोट गाउँपालिका २ स्थित ठेहेगाउँको दुई घरको बीचमा भेटिएको सुतली बम नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ । ठेहेको विजगाउँका दुईवटा घरको साँधमा बेवारिसे अवस्थामा बम भेटिएलगत्तै घरमालिक लोग भण्डारीले ठेहे प्रहरी चौकीलाई खबर गरेपछि सदरमुकाम सिमकोटबाट गएको नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
कञ्चनपुरमा टायर पड्किएर गाडी दुर्घटना : एकको मृत्यु, ६ घाइते
धनगढी &ndash; कञ्चनपुरमा टायर पड्किएर वीङ्गर गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ अन्य ६ जना घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान ७ बजेतिर पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कृष्णपुर नगरपालिका&ndash;५ गुलरियामा महेन्द्रनगरबाट धनगढी आउँदै गरेको म १ ज २४३ नम्बरको वीङ्गर दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेमा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका&ndash;५ बस्ने ७७ वर्षीया मन्दिरा...
कर्णाली नदी किनारमा भेटियो ७ वर्षीया रजनीको शव
दैलख - आठबीस नगरपालिका&ndash;३ दैलख निमाइलकी सात वर्षीया रजनी बडुवालको शव १० दिनपछि कर्णाली नदी किनारमा भेटिएको छ । गत फागुन २४ गते रजनी, उनकी आमा सुकी बडुवालसहित एकै परिवारका पाँचजनाले कर्णाली नदीमा हामफालेका थिए । रजनीको शव मङ्गलबार दैलेख प्रहरीले अछामको असाराघाट नजिकै कर्णाली नदी किनारमा भेटेको हो । बालिकाको शव...
आफ्ना ४ सन्तानसहित आमा कर्णालीमा हाम फालिन्, २ छोरीको शव भेटियो
सुर्खेत &ndash; दैलेखकी एक महिलाले आफ्ना ४ सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी छन् । विश्वभर श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेका बेला सोमबार आठबिस नगरपालिका&ndash;३ निमाइलकी ३५ वर्षीया सुकी बडुवालले ४ छोराछोरीसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी हुन् । नदीमा फाल हालेकामध्ये दुईजना छोरीको शव अछाममा भेटिएको छ । अन्य बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
सुर्खेत &ndash; कालिकोटमा गाडीको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएपछि स्थानीले ठक्कर दिने गाडी नै जलाइदिएका छन् । भे १ ज ११४९ नम्बरको गाडीले ठक्कर दिदा बुधबार साँझ रास्कोट नगरपालिका&ndash;७, सान्नीघाट बजारका तीन वर्षीय प्रेम सिम्खडाको मृत्यु भएको थियो । सिम्खडाको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले ठक्कर दिने गाडीनै जलाइदिएका हुन् । घटनास्थलमै बालकको मृत्यु...
दिनमा तीन पटक लोडसेडिङ भएपछि महिलाले घेरे विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय
हुम्ला &ndash; हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक तीन पटक चर्को विद्युत् भार कटौती (लोडसेडिङ) हुन थालेपछि यहाँका महिलाहरूले आक्रोशित हुँदै विद्युत् कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सिमकोटमा दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी विद्युत् भार कटौती हुँदा यहाँका सेवाग्राही आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेल्दुङ वितरण केन्द्र हुम्लाले चरम लापर्वाही गरेको भन्दै सिमकोट गाउँपालिका&ndash;६...
सिमकोट &ndash; सडक यातायातले हालसम्म नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हालसम्म यहाँका स्थानीयवासीलाई कर्णाली नदी तर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँदेखि स्थानीयवासीले नदीमा भोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध गर्दा पनि कोही कसैबाट माग पूरा नहुँदा सर्केगाड गाउँपालिका २ रिपगाउँका नागरिकले तुइन तर्नुपरेको हो । पुल नहुँदा बर्सेनि तुइन तर्नु परिरहेको सर्केगाड २ रिपगाउँका...
बाजुरा &ndash; बाजुरामा बिहीबार रातिदेखि हिमपात सुरु भएको छ । भारी हिमपातसँगै अत्याधिक चिसो बढेकाले यहाँको जनजीवन कष्टकर भएको छ । बाक्लो हिमपातका कारण किसान उत्साहित र खुशी भएका छन् भने व्यापारी चिन्तित भएका छन् । समयमै हिमपात र वर्षा नहुँदा खेतमा लगाइएका हिउँदेबाली सुक्ने भए भन्दै किसान चिन्तित बनेका थिए...
खलङ्गा &ndash; तिला गाउँपालिका&ndash;७ जुम्ला पोखरीस्थित गोठीगाउँमा लागेको आगोबाट जलेर २५ घर नष्ट भएका छन्। सदरमुकाम जुम्ला खलङ्गादेखि ३५ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त गाउँमा मङ्गलबार सुधारिएको चुल्होको पाइपबाट छतमा भएको घाँँसमा सल्केको आगो गाउँभरि फैलिएपछि २५ घर जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक युवनकुमार चौधरीले बताए। चौधरीका अनुसार...
मन्त्री रावललाई कोरोना संक्रमण
कर्णाली - कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार मन्त्री रावललाई पिसिआर जिन एक्सपर्ट परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा डम्बर खड्काले जानकारी दिए । &ldquo;कोरोना पुष्टि भएपछि मन्त्री रावलको स्वास्थ्य अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच गराइएको थियो&rdquo;, उनले भने,...
सांसद सिंहको गाडीमा आगजनी
सुर्खेत &ndash; जाजरकोट (क) बाट निर्वाचित सांसद तथा कर्णाली प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति गणेशप्रसाद सिंह चढ्ने गाडीमा आगजनी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश ०२००१ झ ००४० नम्बरको गाडीमा गएराति भेरी नगरपालिका ७ पुनमा आगजनी भएको हो। अज्ञात समूहले गरेको आगजनीबाट गाडी जलेर खरानी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका अनुसार...
कञ्चनपुरमा नेकपाका दुई पक्षबीच झडप
काठमाडौं &ndash; नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रचण्ड&ndash;माधव नेपाल र केपी ओली पक्षका नेता, कार्यकर्ताबीच धकेलाधकेल भएको छ । प्रचण्ड&ndash;माधव समूहले दिउँसो १२ बजे बोलाएको विस्तारित बैठकलाई विथाल्ने गरी ओली समूहका नेता, कार्यकर्ताले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि धकेलाधकेल भएको हो । स्रोतका अनुसार ओम बस्नेत लगायतका नेताले ताला खोल्न खोजेपछि...
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध हुम्लामा राँके जुलुस
हुम्ला &ndash; प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विरुद्ध हुम्लामा प्रचण्ड&ndash;नेपाल पक्षका नेकपा कार्यकर्ताले राँके जुलुस प्रर्दशन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असवैधानिक भएको भन्दै उनीहरुले राँके जुलुससहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । सिमकोट स्थिच एयरपोर्ट चोकबाट जुलुश निकालेर विरोध प्रर्दशन गरेको सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य...
सुर्खेतमा एकै विद्यालयका ११ सहित १७ शिक्षकमा कोरोना पुष्टि
सुर्खेत - सुर्खेतमा एउटौ विद्यालयका ११ सहित १७ जना शिक्षकमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल/पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा १७ जना शिक्षकमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । &lsquo;आइतबार आएको रिर्पोटमा जिल्लास्थित १७ जना शिक्षकलाई लक्षणसहितको संक्रमण देखिएको छ,&rsquo; जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले...
हुम्ला- हुम्लामा बिरामी बोकेको जीप दुर्घटना भएको छ । सिमकोट गाउँपालिका ७ डाडाफयाको जबुका नजिकै शुक्रबार राती लु २ च २१०२ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको हो भने एक बच्चा सहित ७ जना घाइते भएका छन् । सिमकोटबाट बिरामी लिन हेप्काखोला गएको जिप बिरामी लिएर सिमकोट फर्किने क्रममा...
जिल्लामा नै छैनन् एम्बुलेन्स,पचास शैयाको अस्पतालमा बिरामी बोक्न डोको!
जाजरकोट&ndash;पचास शैयाको अस्पताल रहेको सदरमुकाम खलङ्गामा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने गरिएको छ। एम्बुलेन्स बिग्रिएको दुई वर्षसम्म मर्मत नगरेपछि जाजरकोट अस्पताल एम्बुलेन्सविहीन भएको छ। अस्पतालको एम्बुलेन्स नेपालगञ्जको कल्लु ग्यारेजमा थन्किएको छ। दुईवटा टायर फेर्न र मोबिल इञ्जिन फेर्नका लागि दुई वर्षअघि एम्बुलेन्स ग्यारेजमा लगिएको भए पनि रकम अभावमा मर्मत...
हुम्ला । हुम्लामा दुई दिन लगातार हिमपात हुँदा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ष जिल्लामा दोस्रो पटक हिमपात भएको छ । यसअघि कात्तिक १८ गते हिमपात भएको थियो । जिल्लामा आइतबार र सोमबार दुई दिन लगातार हिमपात हुँदा चिसो बढेको स्थानीय राजबहादुर बोहराले बताए । बिहानै तापक्रम माइनस सात डिग्री...
कात्तिक १६, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा आज हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल हेरफेर कार्य स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आजै मन्त्रिमण्ड हेरफेर गरी आफू अनुकुल मन्त्री राख्ने तयारी गरेको बताइएको थियो । नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल &lsquo;प्रचण्ड&rsquo;ले तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्न भनेपछि मुख्यमन्त्रीले कार्य स्थगन गर्नुभएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार...
काठमाडौं - दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा निषेधाज्ञा उल्लंघन हुन थालेपछि प्रशासनले सेना परिचालन गरेको छ।सदरमुकाम खलंगामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रशासनले चरणवद्ध रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको थियो। खलंगा बजारको एक ठाउँमा तीन सातादेखि निषेधाज्ञा छ। अर्को ठाउँमा पनि संक्रमण बढेपछि सातायता निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार...
सीता नेपाली कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकमा नियुक्त
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 12th October 2020
नेकपाको कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएका छन । कर्णाली प्रदेशका नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट पदमुक्त गरेका हुन । शाहलाई हटाउँदै उनले प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सुर्खेतबाट निर्वाचित सांसद नेपाली...
नेपाल–चीन सीमामा राखेको ११ नम्बर पिलर ५८ वर्षपछि भेटियो
सुर्खेत &ndash; उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखेको ११ नम्बरको सीमास्तम्भ ५८ वर्षपछि फेला परेको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिञ्जिवी गिरी नेतृत्वको टोलीले बुधबार उक्त सीमास्तभ फेला पारेको हो । सीमास्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका ६ टाकुलेमा भेटिएको जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले...
सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीलाई जबर्जस्ती अस्पताल लगियो
जुम्ला - चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै १९ औं सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई शनिबार राति प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर अस्पताल लगेको छ ।करिब पौने एघार बजे प्रहरीले उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेको डा. केसीका सहयोगी स्थानीय युवा महेन्द्र कार्कीले बताए । &lsquo;हिजोअस्ति राति उहाँसँगै बसे पनि शनिबार अरू नयाँ साथीहरू...
काठमाडौं &ndash; चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनशन सुरु गरेका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अनशन सुरु गरेको बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परिक्षण व्यापक बनाएर...
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा श्रेष्ठलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । जुम्लाबाट निर्वाचित श्रेष्ठ एक महिनादेखि खलंगा बजारमै रहेका थिए । &lsquo;जुम्लामा दिनहुँ संक्रमणको दर बढ्दो छ । मलाई भेट्न धेरै कार्यकर्ता आउन थालेपछि...
हुम्लाको रोडिकोटमा आगलागी : ६ घर जलेर नष्ट
सुर्खेत - हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका&ndash;७, रोडिकोटको ठूलो गाउँमा आगलागीबाट ६ घर नष्ट भएका छन् । स्थानीय जोखे जैसीको घरबाट सल्किएको आगोले आसपासका ६ वटा घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआइजी) बसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिए । बुधबार साँझ ६ बजे जोखे जैसीको घरबाट सल्किएको आगोले छिमेकी हरीभक्त जैसी, मथान...
कालिकोट - कालिकोटको सिमाना नाग्म बजारमा पहिरोले तीन घर पुरिँदा दुईमहिने बालकसहित १० जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान गएको पहिरोमा परी रातिसम्ममा १० जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर धामीका अनुसार तिला गुफा नगरपालिका&ndash; १ का पूर्णा शाहीको परिवारका चारजना मृत्यु भएको हो ।...
सल्यान - वागचौर नगरपालिका&shy;१२ बाफुखोलामा आएको अविरल वर्षाले ओखरेनी गाउँका २५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। ओखरेनी गाउँमा पहिराको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी विस्थापित भएर देउपुरीमा रहेको दुर्गा सरस्वती माविमा आश्रय लिइरहेका छन्। ओखरेनी गाउँमा तीन घर पहिराले बगाएको र गाउँभरिमा सयौ स्थानमा पहिरो गएकाले स्थानीयवासी घर छाडेर विद्यालयमा बसेका छन् । यही...
काठमाडौं - जंगली च्याउ खाँदा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा ४ जना गम्भीर बिरामी भएका छन् । आइतबार साँझको खानासँगै जंगली च्याउ खाएका ठूरीभेरी नगरपालिका&ndash;७, का ३३ वर्षका उत्तमबहादुर शाही, ३१ वर्षका सुर्यबहादुर साही, वडा नम्बर ८ का ३३ वर्षका कमलबहादुर शाही र वर्ष ४४ को सत्यबहादुर शाही गम्भीर बिमारी परेका प्रहरीले जनाएको...
कर्णाली &ndash; कर्णालीमा आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस मनाइँदैछ । यस अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष भदौ ४ गतेलाई प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको बताए ।विसं २०७२ साउन&ndash;भदौमा सञ्चालित...
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जुम्ला र मुगु जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी
सुर्खेत &ndash; कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा आजबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कोभिड&ndash;१९ संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय प्रशासनले प्रदेशका केही स्थानमा यसअघि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् भने प्रदेश राजधानी...
कालिकोटमा पहिरोले वडा सदस्यको घर पु¥यो : एकैपरिवारका चारसहित ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं &ndash; कालिकोटको महाबै गाउँपालिका वडा नम्बर ३ नकु भन्ने स्थानमा पहिरो जाँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।गएराति आएको पहिरोले वडा सद रजबहादुर विष्टको घर पुरिँदा ६ जनाको मृत्यु भएको हो । पहिरोमा घर पुरिँदा वडा सदस्य विष्टका दुई छोरा, दुई छोरी र उनका दाजु डिल बहादुर विष्टका दुई...
महेन्द्रनगरमा भेटिएको बम सेनाद्धारा डिस्पोज
धनगढी &ndash; महेन्द्रनगर बजारको सब्जीमण्डी रोड क्षेत्रमा भेटिएको प्रेसर कुकर बम सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ । बिहीबार बिहान २ बजे भेटिएको बम उज्यालो भएपछि पुगेको नेपाली सेनाको टोली निष्क्रिय पारेको हो । सब्जीमण्डी रोडको भानु पार्टी प्यालेश नजिक झोलाभित्र राखेर छाडिएको अवस्थामा बम भेटिएको हो । बम भेटिएको क्षेत्रमा थारुवान...
बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा एकजना बेपत्ता, दर्जन बढी घर र झोलुङ्गे पुल बगायो
धनगढी &ndash; लगातारको वर्षासँगै बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बाजुराका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेको छ। बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा एकजना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै बाढीले एक दर्जन बढी घर र झोलुङ्गे पुल बगाएको बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले जानकारी दिए । उनले अहिले पनि पानी परिरहेकाले क्षतिको यकिन विवरण...
बालुवाटारमा दुई समूहबीच झडप ,पाँचजना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर
टीकापुर &ndash; कैलालीको टीकापुरमा दुई समूहबीच झडप हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन्। टीकापुर नगरपालिका वडा नं ६ र वडा नं ९ का युवाबीच शनिबार साँझ झडप हुँदा वडा नं ६ प्रसेनीका दिनेश साउद, किरण रावल र सुरज चौधरी र वडा नं ९ बैदीका तपेन्द्र साउद र भुवन साउद घाइते भएको...
श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकी ३८ वर्षीया महिलाको मृत्यु,कोरोना परीक्षणको तयारी
कैलाली &ndash; श्वासप्रश्वासमा समस्यामा देखिएपछि डडेल्धुरा अस्पताल पुगेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । थप उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । डडेल्धुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका&ndash;३ घर भएकी ३८ वर्षीया महिलालाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि डडेल्धुरा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । डडेल्धुरामा उपचार सम्भव...
मरेको मानिस जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म घरमै लास
टीकापुर &ndash; कैलालीको टीकापुर&ndash;१ गणेशपुर शिविरमा मरेको मानिस जिउँदो हुने विश्वासमा पाँच दिनसम्म लास घरमै राखिएको छ । स्थानीय दीपक चौधरीको घरभित्र शव गन्हाउन लागेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गर्दा लास रहेको रहस्य खुलेको हो । बस्ती सुरक्षा समितिका संयोजक बुद्धि दमाईले प्रहरीलाई खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरबाट प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो...
सेती नदीमा बेपत्ता दुई स्वास्थ्यकर्मी मध्ये एकजनाको शव फेला
डोटी &ndash; सेती नदीमा नुहाउन गएका बेला बेपत्ता भएका डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत दुई स्वास्थ्यकर्मीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका घर भएका स्वास्थ्य सहायक हरिश जोशीको शव डोटीको केआइसिंह गाउँपालिका&ndash;५ को बुवातडा भन्ने स्थानमा फेला परेको हो । नदीले बगाएर लैजाँदै गरेको...
सुर्खेत । विपद पीडित परिवारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिना खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाढी पहिरोलगायतका विपदमा परेकाको परिवारका लागि तीन महिना खान पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णाय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी...
पहिरोमा बेपत्ता भएका २२ वर्षीया युवकको तीन दिनपछि शव भेटियो
धनगढी &ndash; बाजुरामा बुधबार दिउँसो पहिरोमा परि हराएका एक युवकको शव आज भेटिएको छ। बुधबार अविरल वर्षासँगै बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका अम्कोटमा गएको पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका युवकको शव शुक्रबार बिहान भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । साँफे मार्तडी सडकखण्डमा पर्ने अम्कोटमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका बुढीगंगा नगरपालिका&ndash;१ अम्कोटका २२...
कालिकोटमा पहिरोमा परी एकै परिवारका ७ जनासहित ८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं - कालीकोटको नरहनीनाथमा गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् । गाउँपालिकाको वडानम्बर ७ मा मंगलबार राति आएको पहिरोले ६५ वर्षीय गंगे बुढाको घर पुरिँदा उनीसहित ६१ वर्षीय श्रीमती नैना, २४ वर्षीय बुहारी कुशा, १८ वर्षीय छोरी विमला, १० वर्षीया नातिनी चन्द्रिका, ७ वर्षीय...
पहिरोमा परी कालिकोटमा ६ जना बेपत्ता
सुर्खेत - कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा ६ जना बेपत्ता भएका छन्। बुधबार बिहान सवा ४ बजे गएको पहिरोमा नरहरिनाथ ७ मा रहेको गंगे बुढाको घर पुरिँदा उनीसहित ६ जना बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा ६२ वर्षीय गंगे बुढा, उनकी श्रीमती ६१ वर्षीया नैनी बुढा, २४ वर्षीया बुहारी कुश्मा बुढा, १०...
कैलालीका दुई वस्तीमा बाढी पस्यो, १०० घर परिवार प्रभावित
काठमाडौं - कैलालीका भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाका वस्तीहरुमा बाढी पसेको छ । गएराति आएको बाढी वस्तीमा पसेपछि करिब एक सय घर परिवार प्रभावित भएका छन् । डुबानमा परेका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिए । भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ को...
सामान खरिदमा कमिशन लिएको भन्दै भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर पक्राउ
बाँके &ndash; बाँकेको भेरी अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनाललाई बिहीबार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ । उनीमाथि अस्पतालको सामान खरिदमा १६ लाख १३ हजार ७५ कमिशन लिएको अभियोग लगाइएको छ । आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश गैरेका अनुसार, स्रोत नखुलेको रकमसहित कम्प्युटर अपरेटर खनाललाई पक्राउ गरिएको छ । आयोगको टोलीले केही...
घट्टेखोलामा रहेको पक्की पुल बाढीले बगायो
कैलाली&nbsp; - बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका&ndash;२ स्थित ताप्रिसेरा घट्टेखोलामा रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ । पक्की पुल बगेपछि साँफे&ndash;मार्तडी सडकखण्डमा आउ&ndash;जाउ पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । साफे&ndash;मार्तडी सडकखण्ड अन्तरगत ओमकोटमा पनि पहिरोको कारण करिब दुई सातादेखि यातायात अबरुद्ध भएको छ । जिल्लाका ग्रामिण सडकहरुमा पनि पहिरोले क्षति पुगेको छ ।...
गरिबीविरुद्ध लड्ने संकल्प गरेका जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा भारी वृद्धि,जनता गरिबीकै चपेटामा
सुर्खेत - कर्णालीमा अहिले आधाभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन्। सरकारी तथ्याकंअनुसार अहिले पनि कर्णालीमा ५१ प्रतिशत गरिबी छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता भने लोभलाग्दो छ। अर्थात यहाँका जनप्रतिनिधिको मासिक तलब भत्तामा भारी वृद्धि गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशस्तरीय पोषण...
काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशसभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर परीक्षणमा शाहीलाई संक्रमण देखिएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए । शाही प्रदेशसभामा अति सक्रिय रहेको र पत्रकारसँगको सम्पर्कमा रहने नेता हुन् । सक्रिय नेता...
जाजरकोट पहिरो अपडेट : ९ जनाको शव भेटियो, ६ जना अझै बेपत्ता
सुर्खेत - जाजरकोटमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका ८ जना मध्ये शनिबार दुई जनाको शव भेटिएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ भने ६ जना अझै बेपत्ता छन् । जाजरकोटका डीएसपी किशोर श्रेष्ठका अनुसार बेपत्तामध्ये ७ जनाको शव शुक्रबार भेटिएको थियो भने शनिबार थप दुई जनाको भेटिएको हो । शनिबार बारेकोट गाउँपालिका&ndash;४,...
सुर्खेत &ndash; कर्णाली प्रदेश सरकारले आज (असार १५ गते) सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा आज यो प्रदेशका जुम्लाबाहेक नौवटै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो । जुम्लामा चैत महिनाको १२ गते धान दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णय गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जानकारी...
कैलाली&ndash; सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशमा सलह किरा भित्रिएमा त्यसलाई टिपेर माछा र कुखुराको दानाका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी आवश्यक तयारी गरेको छ । धान दिवस मनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले सलह किराले पु&yen;याउनसक्ने क्षति रोक्नका लागि यस्तो रणनीति...
क्वारेन्टिनमा बसेका युवकलाई सर्पले डस्यो, अवस्था गम्भीर
धनगढी &ndash; कैलालीको एक क्वारेन्टिनमा रहेका युवकलाई सर्पले डसेको छ । २२ दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसेका ती युवकलाई शुक्रवार राति सर्पले डसेको हो । २२ वर्षीय उनी गौरीगंगा नगरपालिका&ndash;४ स्थित सिद्धार्थ विद्या निकेतनको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए । ती युवकलाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाइएको थियो तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि...
सुर्खेत&ndash; कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १५ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा असार १५ मा प्रदेशका जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । जुम्लामा चैत महिनामै धान रोपाइँ हुँदै आएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले हरेक...
दैलेखका २१ वर्षीय युवकको आत्महत्यापछि कोरोना पुष्टि
सुर्खेत - दैलेखका एक युवकको आत्महत्यापछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतबाट १ महिनाअघि आएका ती २१ वर्षीय युवकले मंगलबार आत्महत्या गरेका नगरपलिका प्रमुख धनश्याम भण्डारीले बताए। बुधबार बिहान उनको शव दुल्लु अस्पताल दैलेख ल्याइएको थियो। सोही दिन स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न सुर्खेत पठाइएको थियो।&lsquo; उनको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ...
क्वारेन्टिनबाट ओढ्ने ओछ्याउने चोरी भएपछि...
बाजुरा&ndash; बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका&ndash;६ पन्धारास्थित पुष्पलाल आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा चोरी भएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेका लागि प्रयोग हुने ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि खानका लागि प्रयोग हुने सामग्री चोरी भएको नगर प्रवक्ता प्रेमबहादुर थापाले बताए । असार ५ गतेदेखि खाली रहेको क्वारेन्टिनको ढोका फोडेरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्री चोरी भएको थापाले जानकारी दिए । क्वारेन्टिनबाट...
कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका पुरूषको शव गाडेपछि सेनाको अन्तिम सलामी
काठमाडौं - असार ८ गते दैलेखका एक जना कोरोना संक्रमित पुरूषको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गयो। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका ३ का ४५ वर्षीय पुरूषको राति साढे ९ बजेतिर मृत्यु भएको थियो। तर मृत्युपछि उनका आफन्तले उनलाई छुन पाएनन् न त हिन्दु संस्कारअनुसार नै उनको अन्तिम संस्कार गर्न पाए। हुन त...
रुकुम काण्डः वडाध्यक्षसहित २३ जना पूर्पक्षका लागि थुनामा
काठमाडौं&ndash; रुकुमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय विवाह प्रकरणका क्रममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्या काण्डका आरोपी २३ जनालाई पूपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । जिल्ला अदालत रुकुमको आदेशले एक जनालाई १ लाख धरौटी र बाँकी २३ जनालाई थुनामा पठाइएको हो । रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायधीश विद्याराज पौडेलको एकल इजलाशाले...
सुर्खेतमा आईसीयूमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
सुर्खेत - सुर्खेतमा उपचार गराइरहेका एकजना कोरोना संक्रमितको मंगलबार मृत्यु भएको छ । वीरेन्द्रनगरको कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचारत दैलेख दुल्लु नगरपालिका ३ का ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर केएन पौडेलले जानकारी दिए । ती पुरुष कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि असार ४ गते...